COVID လွန်ကမ္ဘာတွင် Post-Production Post ကိုလေ့လာရန် New York Alliance (PNYA) Post | NAB သတင်းများ | 2020 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show ၏ထုတ်လုပ်သူ။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » သတင်း » New York Alliance (PNYA) Post-COVID ကမ္ဘာတွင် Post-Production ထုတ်လုပ်မှုကိုစစ်ဆေးရန်
အခမဲ့အစီအစဉ်များကိုသြဂုတ်လ ၆ ရက်ကြာသပတေးနေ့ညနေ ၄း၀၀ တွင်စီစဉ်ထားသည်
New York City - COVID-19 အပြီးတွင်နယူးယောက်ရှိထုတ်လုပ်မှုအလွန်စက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်အဘယ်အရာဖြစ်မည်နည်း။ စက်မှုကျွမ်းကျင်သူများအဖွဲ့သည်ကပ်ရောဂါကပ်ရောဂါနောက်ပိုင်းကမ္ဘာကြီးအတွက်လမ်းပြမြေပုံတစ်ခုပေးလိမ့်မည်။ ၎င်းကိုမည်သို့သွားလာရမည်ကိုအကြံဥာဏ်များပေးလိမ့်မည်။ Post BreakPost New York Alliance မှထုတ်ယူသောအပတ်စဉ်ဗီဒီယိုညီလာခံများ။ အခမဲ့အစီအစဉ်ကိုသြဂုတ်လ ၆ ရက်ကြာသပတေးနေ့အတွက်စီစဉ်ထားသည်th4ညနေ: 00 မှာ
နယူးယောက်တွင်အဆင့် ၄ ပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ခြင်းနှင့်အတူမြို့၏ထုတ်လုပ်မှုလွန်စက်မှုလုပ်ငန်းသည်ပုံမှန်အတိုင်းဖြစ်လာသည်။ စာတိုက်များ၊ အမြင်အာရုံသက်ရောက်မှုကုမ္ပဏီများ၊ အသံပံ့ပိုးပေးသူများနှင့်အခြားသူများပြန်လည်ဖွင့်လှစ်လျက် ၀ န်ထမ်းများနှင့်ဖောက်သည်များသည်ဖြည်းဖြည်းချင်းပြန်လာကြသော်လည်းယခုအခါကုမ္ပဏီများသည်ကျန်းမာရေးနှင့်လုံခြုံရေးအတွက်တင်းကြပ်သောစည်းမျဉ်းများကိုကျင့်သုံးရန်တောင်းဆိုနေကြသည်။ ဒီတစ်နာရီကြာအလုပ်များတဲ့ ၁ နာရီကြာအစည်းအဝေးမှာ ဦး ဆောင်မှုပိုကောင်းတဲ့အမှုဆောင်အရာရှိတွေကသူတို့ကုမ္ပဏီတွေကိုလုံခြုံစွာပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ဖို့နဲ့ဘယ်လိုအလုပ်ပြန်လုပ်ရမယ်ဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတခြားသူတွေကိုအကြံဥာဏ်တွေပေးဖို့ဘာတွေလုပ်နေလဲဆိုတာကိုဖော်ပြလိမ့်မယ်။
Kim Spikes၊ စာတိုက်၏အကြီးတန်းဒုဥက္ကPresident္ဌ၊ နယူးယောက်။ Spikes သည် Sim NY (ယခင် Post စက်ရုံ) ၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်သည် ၁၁ နှစ်ကြာခဲ့ပြီးယခင်က SoHo, TriBeCa နှင့် Brooklyn ရှိအဆောက်အ ဦး များအတွက်စီမံခန့်ခွဲမှုနေရာတွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သည်။
Rochelle ဘရောင်း, အလုပ်အမှုဆောင်ထုတ်လုပ်သူ, The Mill။ PNYA ကုမ္ပဏီဘုတ်အဖွဲ့ဝင်တစ် ဦး ဖြစ်သူဘရောင်းသည်ရုပ်ရှင်နှင့်ရုပ်မြင်သံကြားဌာနတွင်နှစ်ပေါင်း ၂၀ အလုပ်လုပ်ခဲ့သည်။ သူသည်ကြော်ငြာနှင့်ဂီတဗီဒီယိုများမှသည်ဇာတ်ညွှန်းနှင့်သရုပ်ဆောင်ဇာတ်ကားများအထိရှည်လျား။ ကာလတိုစီမံကိန်းများကိုထောက်ပံ့သည့်ဆက်သွယ်ရေးဌာနကိုလက်ရှိတွင်သူစီမံသည်။
Carlie Bergman, တေးသံ။ Bergman သည် ၂၀၀၃ ခုနှစ်တွင် Soundtrack သို့ ADR အသံဖမ်းအဖြစ်ဝင်ရောက်ခဲ့ပြီး၊ ဖြစ်စဉ်နှင့်ရှည်လျားသောပုံစံများကိုစီမံခန့်ခွဲသည်။ နည်းပညာကျွမ်းကျင်သူမန်နေဂျာတစ်ယောက်အနေဖြင့်အသံကိုတင်ရန်ထူးခြားသောရှုထောင့်ကိုဆောင်ယူခဲ့သည်။
Post Coast ထုတ်လုပ်မှု၏ဒါရိုက်တာ Stina Hamlin။ Hamlin သည်ရိုးရာမီဒီယာထုတ်လုပ်သူဖြစ်ပြီးဆုရ VR ဖန်တီးသူဖြစ်သည်။ သူသည်ထုတ်လုပ်သူများအစည်းအရုံး၏အဖွဲ့ဝင်ဖြစ်ခဲ့ပြီးလက်ရှိတွင်ထုတ်လုပ်မှုလွန်ကာလကြီးကြပ်မှုအပါအ ၀ င်လုပ်ငန်းနယ်ပယ်များစွာတွင်ပါဝင်ခဲ့သည်။ သူမသည်လက်ရှိတွင် XR စီမံကိန်းကိုလုပ်ကိုင်နေသည်။ သွေးမှတ်ဉာဏ်: အတွေ့အကြုံ, အိမ်နီစီးရီး.
Russ Hammond, ထုတ်လုပ်သူ။ Hammonds သည်ဇာတ်လမ်းတွဲဇာတ်လမ်းတွဲအတွက်တီဗွီအတွက်ထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့်ကြီးကြပ်ခြင်း ၁၀ နှစ်ကျော်အတွေ့အကြုံရှိသည်။ သူ၏ခရက်ဒစ်များတွင် Netflix ၏အပြန်အလှန်အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိသောစီမံကိန်းဖြစ်သည် ကျိုးပဲ့လွယ်သော Kimmy Schmidt: Kimmy Vs. သိက္ခာ နှင့် Syfy's မင်္ဂလာ!
ခေါင်းစဥ်: COVID-19 အတွင်းနှင့်အပြီးထုတ်လုပ်မှုကိုပြန်လည်ကြည့်ရှုရန်
ဟောပြော: Kim Spikes၊ စာတိုက်၏အကြီးတန်းဒုဥက္ကPresident္ဌ၊ နယူးယောက်
Rochelle ဘရောင်း, အလုပ်အမှုဆောင်ထုတ်လုပ်သူ, The Mill
Carlie Bergman, တေးသံ
Post Coast ထုတ်လုပ်မှု၏ဒါရိုက်တာ Stina Hamlin
မော်ဒီ: Russ Hammond, ထုတ်လုပ်သူ
စက်မှုလုပ်ငန်းဖြစ်ရပ်များ PNYA post ကိုထုတ်လုပ်မှု Webinars 2020-08-05
ယခင်: Dejero သည်ဥရောပရုပ်သံလိုင်းမိတ်ဖက်အသစ်များကိုကြေငြာခဲ့သည်
နောက်တစ်ခု: Cinegy Multiviewer ၁၅.၂: ဘုရင်ကိုကြိုဆိုပါ